QALABKA AQALKA DHIRTA LOO YAQAAN "POLYCARBONATE": MURAAYADAHA IYO QIYAASTA, SAWIRRADA DHISMAYAASHA - DHISMAYAASHA
Si ka duwan aqalka dhirta lagu koriyo, kulaylka kaliya ee qorraxda, aqalka dhirta lagu koriyo (polycarbonate) waxaa la siiyaa ilo dheeraad ah oo kuleyl ah (tusaale, cunto kariye ama lakab pereperevayuschey).
Heerkulka joogtada ah ee kuleylka ah ee dhirta lagu koriyo ayaa dhirta dhirta u fidiya qaab habboon oo haboon oo habboon oo loo kobcayo iyo kobcinta miraha.
Nadaafad, adkaysi, midab leh
Si aan loogu nadiifin tamarta qorraxda kuleylka kuleylka waaweyn, waxaa lagu sameeyaa miisaan yar oo gudaha ah. Cabbiraadooda waxaa lagu go'aamiyaa dhererka dhirta, maaha dhererka qofka.
Tamarta nadiifinta wadnaha ee naqshadahan oo kale ayaa leh cillad - waa inaad ilaalisaa dhirta banaanka ka baxsaniyadoo la furayo qaybta aqalka dhirta lagu koriyo.
Isticmaalka muraayada wuxuu si toos ah u qaabeeyaa habka qaabaynta qaababka aqalka dhirta lagu koriyo. Muuqaalo badan ayaa inta badan laga sameeyay qoryo.
Naqshadeynta dhirta polycarbonate waa mid aan xad lahayn. Xaashiyaha maqaalkan (laga bilaabo 3 ilaa 12 mitir dherer) si fudud u duug, iyada oo aan lahayn dhexdhexaadin dhexe dusha sare ee dusha sare iyo dusha sare ee garabka.
Iyadoo burburinta polycarbonate cell ma sameysid kabaha sida muraayad jilicsan. Xaashida waxyeelada leh waxaa la dayactiray qalab isku mid ah (oo ku dheggan), ama si sahlan ayaa loogu bedelaa mid cusub.
Waxaad jajabin kartaa xaashida warqadda polycarbonate leh mindi caadi ah, adoo siinaya faahfaahin wax kasta oo la doonayo: Laga soo bilaabo miisaan si aad u cakiran.
Waa muhiim: Doodda aan la isku hallayn karin oo ku salaysan nambarka polycarbonate waa kuwa iftiin iyo xoog. Laakiin faa'iidada ugu weyn ee xulashada qalabka korontada waa guryaha rinjirta sare leh polycarbonate cell.
Noocyo kala duwan oo midab leh polycarbonate ayaa suuragal ah in ay u suuragal tahay in ay u sahlanaato oo u leexiyaan aqalka dhirta lagu koriyo si loo soo bandhigo muuqaal qurux badan oo ah beerta.
Qaababka qaababka tayada sare leh ee lagu koriyo ayaa laga dhisay welded tuubada qashinka. Waxaan ku dhejin karnaa wixii dheeraadka ah haddii galvanization lagu rinjiyeeyo.
Ilaalinta ugu adkaysiga badan biraha waxaa loo hubiyaa iyadoo la adeegsanayo lakab ah galvanization dhaldhalaal joogta ahla qalajiyey heerkulka sare.
Noocyada noocan oo kale ah, shaki la'aan, waxaa lagu sameeyaa warshadda, mana ahan aqoon-isweydaarsiga gacanta.
Ka taxadar dhumucda derbiga dhuunta. Tuubbooyinka dhuuban - waa run calaamad u ah been abuur been ah, iyo sidoo kale midabaynta "birta qaawan" birta.
Waa kuwan qaar ka badan. Calaamadaha falsafooyinka hoose:
Muuqaal maskaxeed ma aha mid isku mid ah foorjiga iyo dhererka
xuruufta kala duwan ee laga sameeyay tuubooyinka qaybaha kala duwan
godadka muraayadaha ayaa ah kuwo furfuran ama aan ahayn
Welds aan wali wax laga qaban
Dhamaystiran oo buuxa
Mid ka mid ah "sir" qiimaha hoose - qalab dhamaystiran. Dhibaatooyinka boodhka ah, saldhigga, dhejiska iyo fittings waxaad u baahan tahay inaad soo qaadato oo aad si gooni ah u iibsato.
Digniin: Qeyb kastaa waa inay la socotaa dukumeentiga: baasaboor farsamo, damaanad-saaraha soo-saaraha, tilmaamaha gundhigga.
Waxaa ka mid ah moodooyinka wax soo saarka, sahlanaanta iyo qiimaha jaban mini-aqalka dhirta "Petal" (1x2x0.8 m).
Waxay ka kooban tahay hal xaashi oo xooggan oo ah 2 mm oo dahabi ah oo leh polycarbonate. Xaashidu waxay u egtahay qaab dusha sare ee hoose leh derbiyada. Faahfaahinta dalxiiska ee xaashida waxay ku siinaysaa mid adag. Dhismuhu wuxuu ka samaysan yahay rinjiye rinjiye oo leh 3x2 cm qaboojiye muuqaalkiisa.
Naqshaduhu waa mid aad u fudud in ay adagtahay inaad dib u dhaliso.
Greenhouse "Bilowga" Polycarbonate " (1.05x2.0x0.8 m). Dhaqdhaqaaqyo bir ah oo qoryo leh oo ah 20x20 tubo dhexda galvanized. Dabbaaldegga: muraayad faleebo daahir ah 4 mm. Tuubbooyinka toosan ee xawaaraha waxaa la siiyaa dharbaaxo loogu talagalay in lagu dhejiyo dhulka. Galaan gudaha labada dhinac iyada oo loo marayo xubno qaboojiyaal ah. Waa suurtogal in la isku daro qaybaha laba mitir oo labadaba kordhin dhererka aqalka dhirta lagu koriyo.
Qaab dhismeedka qaabdhismeedka qumman ayaa la jebiyey kaliya soo jeedinta qaab xitaa qaab fudud oo ah qaabka saqafka la isku laabo. Laakiin marmarka qaarkood waxaa jira naqshadeeyaha dhabta ah. Si kastaba ha ahaatee qaab adag iyo goynta go'yada polycarbonate Kordhin kharashka marmarka qaarkoodna lagu koriyo.
Wax ku saabsan polycarbonate
Polycarbonate oo qiimo jaban ayaa lagama maarmaanka u ah xaqiiqda ah inay tahay qaali. Laakiin qiimaha hooseeya ayaa ugu badan inuu sababo xaqiiqda ah in xaashida la isticmaalo lakabka aadka u khafiifka ah ee daboolka laga bilaabo ultraviolet qoraxda.
Lakab ilaalin khafiif ah ayaa si dhaqso ah u dhaqday by roob, oo ay suuxaan barafka. Waraaqaha indhaha ayaa bilaabaya da'da - jaale iyo luminta daahfurnaanta. Sidaa darteed polycarbonate qaali ah oo aan u adeegayn waqti dheer.
Kaydinta waxaa loo balan qaadayaa inay keenaan kharashka cusub.
Waa muhiim: Marka aad rakibaysid polycarbonate, xasuuso in dusha sare ee laga ilaaliyo raajada ultraviolet-yada ah waa inay noqotaa soo baxa.
Qaar ka mid ah shirkadaha wax iibsada lakabka ilaalinta ee labada dhinac ee xaashida. Xaaladdan oo kale, dhinaca midka sare ku yaal waa mid aan la isku hallayn karin.
Marka aad iibsanayso dhammaanteed waxay u baahan yihiin shahaado, ka wada sheekeysta iibiyeyaasha-la-taliyayaasha waxyaabaha ay ka midka yihiin polycarbonate-ka ee soo saarayaasha kala duwan.
Bixinta iyo Golaha
Qodobbada "dhismayaasha" ee aqalka dhirta lagu koriyo ayaa laga saari karaa saad iyo naftaada iskuday. Waxsoosaarayaashu waxay bixiyaan dhammaan noocyada lagu koriyo oo loo yaqaan 'pre-step-step-step-step-step for the assembly of the structure.
Goobaha shirkadaha sumadda leh ayaa la bixiyaa iyo barashada fiidiyowga ee golaha.
Haddii aad rabto, iibiyeyaashu waxay bixin doonaan adeegyo loogu talagalay bixinta xirmada iyo kulliyadda aqalka dhirta lagu koriyo ee xagaaga.
Laga bilaabo jiilaalka ilaa jiilaalka
Guryaha lagu dhiso meelo iftiin lehiyada oo ujeedada loo marayo xagga galbeedka ilaa bari.
In ciidda laga ilaaliyo bay'ada dibadda, waxaa ugu horreyn lagu beeray geedo kulaylka jecel basbaaska macaan, yaanyada, qajaarka, eggplants. Ka dib markii laga beerto geedo beerta, waxaa lagu bedelay radishes, isbinaajka, dill, dhir, basasha cagaaran. Xilliga oo dhan laga bilaabo Febraayo ilaa December ee aqalka dhirta si joogto ah wax, laakiin sii kordhaya.
Bannaanka u badan ayaa leh dhowr lagu koriyo, loogu talagalay beerista dalagyada khudradda kala duwan, xawaashyada udgoon ee dhir udgoon, geedo ubax ah.
Waxaan qoto dheereynaa, waan diiranahay
Dhaqan ahaan hababka polycarbonate oo dhan waxaa loogu talagalay qaabdhismeedka dhulka, laakiin way fududahay si ay u noqdaan kuwo adag aqalka dhirta lagu dubo.
Way fududahay in la sameeyo. By size ee aqalka dhirta lagu koriyo waxaan ku qodo dalxiis for saddex seddexda xayndaab (ku dhawaad ​​60 cm). Darbiyada hareeraha waxaan ku xoojineynaa guddiyada, oo kor ku xusan waxaannu xirxirnaa qoryaha ka soo baxa geedo iyo boorsooyinka.
Saddex-meelood laba meelood oo caleemo ah ayaa caleenta hurda, haramaha, digada, laanta. Top ugu shubay lakabka ciidda bacrin ah. Dusha ayaa loo qoondeeyey hal ama laba geed oo ka hooseeya heerka dhulka. On dhogorta alwaax dhigay dhigay naqshadda ee lagu koriyo ah.
Haddii aqalka dhirta lagu koriyo uusan ku habooneyn beerta, ama aad u baahan tahay geedo badan oo badan, waad iska xakameyn kartaa naftaada dhismo yar.
Guryo-yar oo lagu koriyo, kulaylka ayaa sidoo kale soo saaraa biofuels dabiici ah. Hase-yeeshe, shaqo-dhiska iyo rakibidda ayaa u baahan doona wax aad u yar.
Biofuel, la dhigay godad dhulka hoostiisa, si fiican u diiriya ciidda iyo hawada ee lagu koriyo inta lagu jiro xilliga xagaaga. Xilliga dayrta waa in la beddelo qayb cusub.
Guryaha noocan oo kale ah Isdhex gareeyaan, dhaqaale ahaan ku hayn kuleylka. Waxay u badan yihiin loo isticmaalo geedo sii kordhaya ee khudaarta hore, iyo bilawga ah ee cimilada diiran, diirran geedo waa in la "u guuriyaa" si loo furo sariiro. Ka dib oo dhan, mini-greenhouses waa hooseeya, iyo waxaa jira waqti ah marka geedo, isku fidin si ay u koraan, si fudud u lahayn meel u koraan.
Waxaa jira farsamada beeraha oo kale - si aanay u wiiqin dhirta abuurka beerista si deg deg ah u deg deg meel joogto ah, kaas oo lagu daboolay aqalka dhirta fudud ee filimka. Iyadoo bilawga ah ee aqalka dhirta lagu koriyo ee dabaysha ayaa la saaraa.
Dabeecad yar oo polycarbonate ah ayaa ku kacaya, dabcan. qaali ahmarka loo eego qaab shaxan leh oo leh foormo kala duwan. Laakiin isagu aad u xoog badan iyo dari badanbadan si fiican u ilaaliyaaHaa, waxayna u muuqataa mid aad u fiican. Isla mar ahaantaana, koriyo polycarbonate, sida filimada, lagu rakibay dhibaato la'aanWaa sahlan tahay in la burburiyo oo u guuro meel kale.
Waxaan u baahan nahay khibrad qaar ka mid ah ilaalinta cimilada iyo aqoonta xilliga sii kordhaya ee dhirta kala duwan ee lagu beeray aqal-yar oo lagu koriyo.
Xisaabinta halkan waa tan: Haddii aad abuurto abuurka goor hore, geedo ayaa wada kori doona ilaa dhaxan ugu dambaysa. Waxaa jiri doona xaalad ah marka ay wali halis u tahay dhirta ku-tallaalidda dhulka, waana wakhtigii ay ka saari lahaayeen hoos-kuleylka, haddii kale waxay rajo-la'aan yihiin in ay hoos u dhigaan gabood hoose.
Guryaha aqalka dhirta ah - qaabdhismeedku waa mid faa'iido leh. Marka laga reebo khudaarta hore, wuxuu ballan-qaadayaa hiwaayadaha cusub. Mid ka mid ah waxay noqon doontaa in aan dhisto saadaalinta cimilada u gaarka ah, sii xusuus qor cimilada sannadlaha ah, barashada cilmiga beeraha iyo farsamooyinka beeraha si qoto dheer, sifooyinka noocyada kala duwan ee khudradda, karti u leh in ay doortaan miraha.
Iyo sidoo kale - aqalka dhirta lagu koriyo ayaa weligood ka xoroobi doona bakhaarada guryaha magaaladaada boqolaal koob oo caag ah oo geedo ah.
Sawirrada hoos ku qoran: